एमाले सहमति नजिक कि विग्रह नजिक? – nepaljagaran.com
एमाले सहमति नजिक कि विग्रह नजिक?
नेपाल जागरण । २५ असार २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित
काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलको बिहीबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
विगत चार दिनदेखि निरन्तर छलफलमा रहेका नेताबीच सहमति हुन सकेको छैन । तर, उनीहरूले वार्ता सकारात्मक भन्दै कृत्रिम अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
नेताहरूको यस्तो कार्यशैलीले एमाले एकजुट बन्न कठिन हुन सक्ने भन्दै आमकार्यकर्ताहरूमा आक्रोश छाउन पुगेको छ। कुनै सहमति हुन सकेको छैन। एमाले एकतामा सहमति हुने हो कि विग्रह आउने हो भन्नेमा अझै अन्योल छ । यस्तो अन्योलता बढ्न थालेपछि कार्यकर्ता तहमा आक्रोश छाउन पुगेको हो।
बैठकहरू निष्कर्षविहीन, कार्यकर्तामा आक्रोश, नेताहरू ‘पेन्डुलम’ बन्दै
सिंहदरबारमा बिहीबार कार्यदलको बैठक एकै दिन दुईपटक बसे पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन। पार्टी एकताका लागि गम्भीर छलफल भए पनि अझै कुनै सहमति हुन नसकेको कार्यदलका सदस्यहरूले जनाएका छन्।
छलफल जारी रहेको र शुक्रबार पुनः छलफल हुने नेताहरूले बताए। वार्ता निष्कर्षविहीन भए पनि सधैं सहमति हुने क्रममा छ भन्दै नेताहरूले झुट बोल्न थालेकाले उनीहरू ‘पेन्डु्लम’ बन्दै जान थालेको आमकार्यकर्ताको निष्कर्ष छ।
नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले कार्यदलले सहमति जुटाएरै छोड्ने विश्वास व्यक्त गरे। छलफल जारी रहेको र शुक्रबार पुनः कार्यदलको बैठक बस्ने सहमति भएको उनले बताए। ‘छलफल जारी नै छ, हामी विश्वस्त छौँ कि कार्यदलले सहमतिका साथ पार्टी एकतालाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउनेछ, हामी भोलि (शुक्रबार) पुनः बैठक बस्नेछौं,’ नेम्वाङले भने। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।
हाम्रा माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरुद्ध हुन्छ: रायमाझी
अष्टलक्ष्मीलाई ओलीले साेधे: फेरि पार्टी फुटाउन माधव नेपाल चाहियो ?
अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच सुरक्षा सम्झौता
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो’
काठमाडौँको सितापाईलाबाट पेस्तुलसहित एक जना पक्राउ
बितेको २४ घण्टामा १ हजार ७६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
गठबन्धनको सरकारले भत्काउन मात्रै जानेको छ: अध्यक्ष ओली